IOS waxaa ku dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa ee soo mara taariikhda, laakiin horeyba waa loo xaliyay | Wararka IPhone
Project Zero, oo ah koox Google si gaar ah ugu heellan helitaanka cilladaha amniga ee nidaamyada jira, ayaa shaaca ka qaaday maalmahan mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa ee ay iOS soo hesho tan iyo markii la abuuray. Ilaa shan jebinta amniga muddo labo sano gudahood ah Waxay ka faa'iideysanayeen inay ku rakibaan basaasnimo iPhone-ka iyo iPad-ka.
Waa maxay cilladaha amnigaas? Macluumaad noocee ah ayaa lagaa helay? Qalab noocee ah bay u nugul yihiin? Sidee u shaqeeyeen? Waxaan kuu faahfaahin doonnaa faahfaahinta oo dhan, iyada oo aan lahayn dumaashi ama belaayo., iyo luqad qof walba fahmi doono dhibaato la'aan.
1 Shan cilladood oo xagga amniga ah
2 Saddex ka mid ah cayayaanka ayaa mar horeba la hagaajiyay
3 Xalka: marwalba cusbooneysii nooca ugu dambeeya
Shan cilladood oo xagga amniga ah
Waa maxay jebinta amniga? Nidaamyada hawlgalku ma dhammaystirna, ma jiro nidaam lama-taabtaan ah oo aan waligoodba dhici doonin. Waxaa jira nidaamyo kaliya oo ka amni badan kuwa kale maxaa yeelay waxay ku adkeeyaan wax jabsadayaasha, laakiin haddii ay xiiseynayaan, waxay had iyo jeer helayaan cilladaha amniga ee ay ka faa'iideysan karaan. Cilladaha amniga ayaa ah "godad" ay hackers ku soo gali karaan nidaamkeena iyo sameynta waxyaabo aan la oggolayn, sida rakibidda basaasyada.
Software kasta oo aan helno laguma rakibi karo iPhone-keena ama iPad-kayga, kaliya kan ku jira App Store, iyo in Apple ay dib u eegis ku sameyso. Xitaa software-ka ku jira App Store-ka oo aan rakibi karno, wuxuu leeyahay xaddidaadyo waxaana jira howlo uusan marin u helin, taasna waxay ku saleysan tahay amniga ay Apple siiso dadka isticmaala. Laakiin sidaan nidhi, ma jiro barnaamij kaamil ah oo mararka qaarkood "godad" ayaa ka soo baxa taas oo barnaamijyada xun ay ku siiban karaan. Shantan cilladood ee amniga ee aan maanta ka hadlaynaa waxay u oggolaadeen qaar ka mid ah bogagga internetka ee ay abuureen haakarisku inay ku rakibaan basaas qalabkeenna macruufka iyadoo aan ka warqabin, waana wax si cad u dhaafaya dhammaan tallaabooyinka amniga ee Apple.
Maxay yihiin bogagga shabakaddu? Lama daabicin, laakiin sida ku cad macluumaadka ka soo muuqday shabakadda, kuwani waa bogag fikrado siyaasadeed si wanaagsan loo qeexay oo si cad loogu abuuray kooxo gaar ah inay helaan, markaa waxaa la tuhunsan yahay in weeraradan ka dambeeya ay jiri doonto dowlad (ama dhowr) waxa ay doonayeen ay ahayd inay u basaasaan kooxo gaar ah oo dadkooda ah.. Xogtee ayey heleen? Telefoonnada, farriimaha, WhatsApp, Telegram, bogagga, goobta ... macluumaad aad u qiimo badan oo ay ku bixin lahaayeen lacag aad u tiro badan.
Saddex ka mid ah cayayaanka ayaa mar horeba la hagaajiyay
Project Zero wuxuu ku wargaliyay Apple shantaan cilladood oo dhanka amniga ah bishii Febraayo 2019, waqtigaasna seddex ka mid ah shantaas cilladood ayaa horeyba loogu hagaajiyay cusboonaysiinta u dhiganta ee ay Apple sii daayay waqtigaas. Labada cayayaanka ee aan la hagaajin, maxaa yeelay Apple ma ogeyn illaa Mashruuca Zero uu tuso, waxay qaadatay toddobaad in la xalliyo iyadoo la cusbooneysiinayo macruufka 12.1.4. Taasi waa, liddi ku ah waxa lagu daabaco warbaahinta badankood, ma ahan laba sano oo iPhone-kena loo soo bandhigo weeraradan, maxaa yeelay Apple waxay daadinaysay cayayaanka sida ay u ogaatay.
Muddada ugu dheer ee cayayaanka firfircoonaa ay ka yaraayeen 10 bilood ("Chain 3"), cayayaanka intiisa kale waxay shaqeynayaan mudo ka yar taas sababo la xiriira cusbooneysiinta ay Apple bilaabayso, sida aad ku arki karto jaantuska kor ku xusan cutubyadan oo muujinaya taariikhda iyo noocyada xallinaya mid kasta oo ka mid ah cilladaha amniga.
Xalka: marwalba cusbooneysii nooca ugu dambeeya
Kama daali doonno ku celcelintooda in kasta oo xaqiiqda ay tahay in qaar badani diidaan inay aqbalaan: haysashada nidaam hawlgal oo ku taageeraya iyada oo loo marayo cusbooneysiin joogto ah iyo mid dheereeya ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu dammaanad qaadi karo nabadgelyada ugu badan ee suurtogalka ah. Waa muhiim in waqtiga jawaab celinta ay yar tahay, in cusbooneysiinta xallinta dhibaatada la helo sida ugu dhakhsaha badan, iyo inay sidoo kale gaarto qalab badan intii suurtagal ah. Nidaamka hawlgalka ee lama taabtaan ah ma jiro, laakiin waa inaad isku daydaa inaad u dhawaato sida ugu macquulsan inaad ku guuleysan karto yoolkaas aan la gaari karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » IOS waxaa ku dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa ee soo mara taariikhda, laakiin horeyba waa loo xaliyay